Chictonic: torolàlana ho an'ny biby fiompiana - Vitaminina - 2020
Ahoana no hanomezana vitamina vitaminina ho an'ny biby
Chiktonik - toeram-pitsaboana iray izay mampiditra vitamin sy amino asidra ary natao hanatsarana sy handanjana ny fihinan'ny biby fiompy sy ny vorona.
Dosage sy fomba fampiasa
1 ml Chiktonika dia misy vitamina: A - 2500 IU, B1 - 0,035 g, B2 - 0.04 g, B6 - 0.02 g, B12-0,00001, D3 - 500 IU; Arginine - 0.00049 g, methionine - 0,05, lysine - 0.025, chloride choline - 0.00004 g, pantothenate pendant - 0.15 g, alfatocoferol - 0.0375 g, threonine - 0.0005 g, serine - 0,00068 g, asidra glutamika - 0,0116, proline - 0.00051 g, glycine - 0.000575 g, alanine - 0.000975 g, cystine - 0,00015 g, valine - 0,011 g, leucine - 0,015 g, Isoleucine - 0.000125 g, tyrosine - 0.00034 g, phenylalanine - 0.00081 g, tryptophan - 0.000075 g, - 0.000002 g, inositol - 0.0000025 g, histidine - 0.0009 g, asparagine acid - 0,0145 g.
Ny zava-mahadomelina dia hita amin'ny endriky ny ranon-tsavony mainty maitso ho an'ny fitantanana ny orana. Izy io dia afon-tavoahangy misy vera 10 ml mena ary maimaim-poana ihany koa amin'ny tavoahangy polonina 1, 5 sy 25 litatra, voahodina ao anaty fitoeran-kitapo misy plastika fotsy, izay mihidy amin'ny ravina mifehy ny fanokafana voalohany.
Ny zava-mahadomelina dia manana alim-pandanjana ny votoatin'ny zava-boajanahary, ny asidra amino ary ny vitamina ao amin'ny firafiny, izay manampy amin'ny fanonerana ny tsy fahampian'izy ireo amin'ny vatan'ny biby. Chiktonik dia mitombo ny fanoherana tsy voafaritra amin'ny toe-javatry ny tontolo iainana izay heverina ho tsy mendrika.
Fantatrao ve? Fanoherana tsy voafaritra tsara amin'ny zavamananaina - Fiarovana izay mikendry ny hamotika ireo mpandraharaha vahiny ao amin'ny vatana.
Chiktonik dia fanentanana ny fitomboana sy ny fampandrosoana ny biby kely, ny fampihenana ny fahafatesan'ny biby, ny fiantraikan'ny alahelo, ny fampitomboana ny fanoheran'ny vatana amin'ny alahelo sy ny aretina, dia misy fiantraikany tsara eo amin'ny hoditra, ny volony ary ny felana amin'ny vorona.
Ny Chiktonik dia aseho amin'ny fampiasana azy mba hampihenana ny metabolisman'ny biby fiompy mandritra ny vanim-potoanan'ny sakafo tsy mifandanja, ary koa amin'ny adin-tsaina sy ny vokatra avo lenta, raha voapoizin'ny mycotoxins ny biby, ary aorian'ny fitsaboana antibiotika, ary koa ny fampidirana ireo vakisiny. Ny fampiharana fampiasana dia ny tsy fahampian'ny metabolika, ny proteinina sy ny tsy fahampian'ny vitamin.
Manampy zava-pisotro ny zava-mahadomelina ary ampiasaina mandritra ny 5 andro. Miankina amin'ny karazana biby, ny zava-mahadomelina dia ampiasaina amin'ireto dingana manaraka ireto:
Chiktonik ho an'ny vorona: mpihantona, tovovavy tanora, mametraka menaka 2 ml isaky ny 1 litatra ny rano.
Manamboatra zava-mahadomelina toy ny Enrofloks sy Amprolium koa ny fananganana vorona tanora.
Ho an'ny foza dia mampiasa 20 ml ny zava-mahadomelina amin'ny iray.
Ho an'ny zanak'omby, ampiasaina 10 ml ny fanomanana ho an'ny iray, tanora mandritra ny antsasak'adiny hatramin'ny taona sy tapany, fitsaboana 20 ml ny fanomanana ho an'ny iray.
Ho an'ny lavaka fanosotra dia 3 ml isaky ny iray ampiasaina, 20 ml isaky ny iray ampiasaina amin'ny famafazana tantely sy bevohoka.
Ho an'ny zanak'ondry sy ny ankizy, 2 ml ny fanafody ampiasaina ho an'ny iray, ny ondry sy ny osy dia manome fanafody 4 litatra isaky ny iray.
Chiktonik ho an'ny bitro dia ampiasaina amin'ny endriky vahaolana: 1 ml ny fanafody isaky ny 1 litatra.
Fantatrao ve? antiparasitic - Ny zava-mahadomelina izay ampiasaina amin'ny fanemorana ny fanoratana na famonoana tanteraka coccidia (parasites intracellular), izay matetika no manindrona ny vorona.
Raha ilaina izany, dia azo zaraina hatramin'ny 15 andro ny fianarana, na averina indray 1 volana.
Ao amin'ny volavolan-java-bozaka raha mitombo ny vorona mba hampihenana ny voka-dratsin'ny adin-tsaina, izay vokatry ny fampidirana vaksiny, coccidiostatics sy antibiotika, io fitsaboana io dia asaina homena amin'ny vorona araka ny tahan'ny 1 litatra an'i Chiktonika isaky ny taonina ny rano.
Nomena rano ny vorona 3 andro mialoha sy aorian'ny fiakarana.
Raha mikasa ny hanangona na hivezivezy ny vorona iray, ny Chiktonik dia manana torolàlana manaraka ho an'ny vorona: ny akoho, ny mpihinam-bolo, ny fametrahana boaty - ny fanafody dia omena 2 andro mialoha ary 3 andro aorian'izay, amin'ny diky 1 litatra ny rano.
Ho an'ny fitsaboana aretin'ny akoho dia mampiasa fanafody toy izany: "Solikoks", "Baytril", "Amprolium", "Baykoks", "Enrofloksatsin", "Enroksil".
Tsy misy fepetra manokana tokony horaisina. Tsy ilaina koa ny mihazona fepetra sasany amin'ny famonoana sy ny fihinanana hena biby sy vorona, satria tsy misy fiantraikany amin'ny kalitao sy ny fiarovana ny hena sy ny atody izany. Azo ampiasaina amin'ny zava-mahadomelina hafa ny zava-mahadomelina.
Zava-dehibe izany! Mandritra ny asa miaraka amin'ny fitsaboana dia ilaina ny mijery fisorohana fiarovana sy ny fanasana tànana alohan'ny fampiasana azy..
Ny voka-bary rehefa ampiasaina amin'ny Chiktonika ho an'ny biby sy ny vorona dia tsy voaorina. Ny zava-mahadomelina eny an-tsena dia maharitra ela, mandalo ny fitsapana rehetra ilaina ao amin'ny laboratoire ary ankatoavina ho fanafody azo antoka.
Misy karazana fampitandremana ho an'ny fampiasana: raha toa ny biby dia manana fahatsapana na tsy firaharahiana amin'ny singa mifototra amin'ny zava-mahadomelina, dia tsy voatery ny zava-mahadomelina.
Chiktonik dia napetraka ao anaty fonosana voalohany, ao anaty efitrano maizimaizina sy maina, amin'ny faran'ny 25 ° C. Ny fepetra fampiasana azo antoka dia 2 taona.
Zava-dehibe izany! Voarara ny fampiasana ny fanafody aorian'ny daty fandaniana.
Noho izany, i Chiktonik dia heverina ho fomba mahomby mahomby izay ahafahana manatsara ny endriky ny kalitao sasany amin'ny biby fiompy sy ny vorona. Zava-dehibe ny manaraka ireo fanoloran-kevitra amin'ny fampiasana sy manaraka ny fepetra fisorohana sy ny dosie hahatratrarana ny vokatra fara-tampony.
Famokarana sikilika ao an-trano: ahoana no hamahana mandritra ny voninkazo?
Manahy momba ny voninkazo: inona no tokony hataontsika raha miverina amin'ny maozina ny cyclamen?
Mandao an'i Burdock: ny tombontsoa sy ny fahasimbana amin'ny fotoana fanangonana sy ny fomba fampiasana
Fikojakojana ny karazany amin'ny fasika ary iza no tsara kokoa ny mifidy: maina na maina
Fitsipika momba ny fambolena sy ny fiahiana ny orana Double Delight
Inona no mahasoa ny budra ivy ary ahoana no hanomanana izany
Ny endriky ny fambolena ny ryabyny ryabynistnogo, maniry sy mikarakara ny hedge
Misy marika na faritra hafa eny amin'ny ravin'ny spathiphyllum? Antony, fitsaboana sy fisorohana aretina
Ireo tsikombakomba miteraka dragona Scarlet Lemon Lime ao an-trano
Ahoana ny fomba hisasarana boribory ombivavy
Mandao ny ambiny any amin'ny firenena
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ahoana no hanomezana vitamina vitaminina ho an'ny biby